४.८९ अङ्कले नेप्से बढ्दा २३ करोडभन्दा बढीको कारोबार | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ४.८९ अङ्कले नेप्से बढ्दा २३ करोडभन्दा बढीको कारोबार
मुख्य खबर, लगानी 60 views
४.८९ अङ्कले नेप्से बढ्दा २३ करोडभन्दा बढीको कारोबार
फागुन २९, काठमाडौं (अस) । मङ्गलवार कारोबारको शुरु अवधिदेखि लगानीकर्तालाई आशा देखाएको नेप्से कारोबारको अन्त्यमा ४ दशमलव ८९ अङ्कले बढेर १ हजार २ सय ८१ दशमलव ९० विन्दुमा गएर टुङ्गिएको छ । मङ्गलवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ३८ प्रतिशत बढेको छ ।
सो अवधिमा १ सय ५६ कम्पनीको ३ हजार १ सय १७ पटकको व्यापारमा रू. २३ करोड ७० लाख ३० हजार ३ सय ८७ बराबरको ५ लाख ५५ हजार ७ सय २२ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नबिल बैङ्क, युुनिलिभर नेपाल, एभरेष्ट बैङ्क, नागरिक लगानी कोष, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्क, सानीमा बैङ्क, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, हिमालयन बैङ्क र जनता बैङ्कको शेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको रू. २ करोड २१ लाख ६३ हजार ३९ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन कम्पनीको १ सय ९० पटकको ब्यापारमा न्युनतम रू. १ हजार ७ सय १९ देखि अधिकतम रू. १ हजार ७ सय २८ सम्म कारोबार भएको छ ।
मङ्गलवार ७७ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ५१ कम्पनीको शेयर मूल्यमा कमि आएको छ । यस दिन श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनीको सबैभन्दा बढी ७ दशमलव १४ प्रतिशत शेयर मूल्य बढेको छ ।
मङ्गलवार कारोबारमा आएका ९ समूहमध्ये बीमा समूह शून्य दशमलव १७, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह १ दशमलव ४२ र लघुवित्त समूह शून्य दशमलव २९ प्रतिशतले घटेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक बढेको छ । यस दिन बैङ्किङ् समूहको शून्य दशमलव ५, होटल समूहको ३ दशमलव ४, जलविद्युत समूहको शून्य दशमलव ६१, वित्त समूहको शून्य दशमलव ४८ र अन्य समूहको परिसूचकमा १ दशमलव शून्य २ प्रतिशत बढेको हो ।